Kurwisa yako Android kubva Chrome neVysor | Linux Vakapindwa muropa
Unganidza yako Android kubva Chrome neVysor
Kuve nekudikanwa kwe kukwanisa kudzora yangu Android foni kubva pc kubva kubasa kwangu, kwandinenge ndine zvese zvisingakwanisike nekutenda kune sysadmin, ini ndaifanirwa kutsvaga chikumbiro chinonditendera kuti ndikubatanidze uri kure pasina chikonzero chekuisa mutengi paPC.
Uye apa ndipo paive Ndakaona Vysor, chiwedzero chakagadzirirwa Chrome iyo iyo inotibvumidza isu kure kurega kubatanidza kune yedu Android foni nekungoisa chete mashandisiro ayo pafoni yedu uye nekuve nekuwedzeredzwa kuiswa mune yedu browser
Panguva iyo Vysor iri sarudzo yakanakisa mukutarisana nedambudziko iri Ndinayo saka ndakafunga kuiisa. Sezvo isu tichingoda Chrome yeiri basa, tinogona kuisa iyi sarudzo pane chero system yatinogona kuisa Chrome.
Maitiro ekuisa Vysor?
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuisa yekuwedzera mune yedu browser, iyi link Ndinoisiya pano saka unogona kuzviwana.
Sechinodiwa chechipiri isu tinofanirwa kuve neADB vanodzora sezvo tichifanira kubatanidza foni yedu kune pc kuitira kuti iko kuishandira kuiziva uye nekuisa apk yayo pafoni yedu. Mune mazhinji masisitimu aripo vane madhiraivha eiyo Android natively.
Kana izvi zvaitwa, tinoenda ku "chrome: // apps" uye isu tinovhura Vysor tinya bhatani "Tsvaga Midziyo", zvinofanirwa kutaurwa kuti isu tinofanirwa kuve nefoni yedu yakabatana ne USB, ichatiratidza mudziyo wedu watinodzvanya pairi.
Pachiitiko chekutanga, sekutaura kwandanga ndamboita, ndakaisa application yako. Kubva pano iwe une maviri sarudzo inova yemahara vhezheni uye yakabhadharwa vhezheni.
Mune vhezheni yekutanga seyese yemahara, iine kushambadza uye imwe inopesana neyandakawana ndeyekuti ndeyekuti foni inofanira kugara yakabatana neUSB.
Uye mune yakabhadharwa vhezheni ivo vanobvisa iwo ma ads uye vanowedzera sarudzo yekugona kubatanidza zvisina waya.
Kunyangwe paine dzimwe sarudzo senge TeamViewer mune yangu kesi ini handina mukana kune iyi sarudzo sezvo iri yekufanira kuisa mutengi paPC, saka sarudzo pasina kuisa chimwe chinhu pakombuta ndeichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Unganidza yako Android kubva Chrome neVysor
Zvakanaka, usanyunyute pamusoro pevatariri vebasa rako, mune rangu ini handikwanise kushandisa kuwedzerwa nekuti sezvo mashoma ekuwedzeredzwa anotenderwa ini ndinowana uyu meseji:
Iye maneja akavharira iyo Vysor yekuwedzera?
Izvo zvinosiririsa, saka ndinogona kutenda kuti vandibvumidza kushandisa Chrome sekuda kwangu: p
MegaMario: Iyo yemahara Linux vhezheni yechinyakare nintendo mutambo